Mint, Browser ကို | Lite ကို, ကို Safe, ကြော်ငြာ-အခမဲ့မြန်က်ဘ်, | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » Mint, Browser ကို - Lite ကို, အစာရှောင်ခြင်း Web သည်ကို Safe, AdFree
Mint, Browser ကို - Lite ကို, အစာရှောင်ခြင်း Web သည်ကို Safe, AdFree APK ကို
Mint, Browser ကိုအန်းဒရွိုက်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကို web browser များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Breakneck အမြန်နှုန်း, privacy ကို, လုံခြုံရေးအားလုံးတစ်ခုတည်းအလွန်သေးငယ်သောအထုပ်ထဲမှာလာကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 10 ကို MB app ကိုသငျသညျစျေးကိုအဆမတန်မြှကျန်တာတွေကျော်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဦးစားပေးတဲ့အခါအသက်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။Key ကို features တွေ
အလွန်သေးငယ်သောအရွယ်အစား: အနိမျ့သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုနှင့် breakneck ပစ်လွှတ်မြန်နှုန်းပိုမိုမြန်ဆန်အရင်ကထက်အွန်လိုင်းသင်သည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
user-ဖော်ရွေဒီဇိုင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာကိုအဘယ်သူမျှမဖုန်ထူထောင့်ရှိပါတယ်။ သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသင်မှန်လိုအပ်သမျှကိုရှာပါ။
Voice ကိုရှာဖွေရေး: သင်၏လက်၌အခမဲ့ဝှေ့ယမ်းဖြင့်အလုပ်များ!
full-featured UI ကို: ရုပ်ဖျက် & စာဖတ်ခြင်းသည် Modes, ရွေးချယ်မှုများနှင့်ထို့ထက် ပို. ချွေတာမိုဘိုင်းဒေတာ။
Mint, Browser ကိုအကြောင်း
ဒါဟာ Browser ကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက် Xiaomi ကကဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလက်ခံရရှိရန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုသုံးနေစဉ်သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများကြုံတွေ့ရပါက, ကိုလိုင်း drop အခမဲ့ခံစားရ: mint.browser.feedback@gmail.com
Google က FB သွားရောက်လည်ပတ်ဘို့စူပါပေါ့ပါးဆုံး, အမြန်ဆုံး, smoothest, လုံခြုံဆုံး web browser ကို။
Mint, Browser ကို - Lite ကို, အစာရှောင်ခြင်း Web သည်ကို Safe, AdFree
11.16 ကို MB
Xiaomi က Inc က